Tiwa Savage na Yemi Alade a na-akọ ọnụ otele? - BBC News Ìgbò
Tiwa Savage na Yemi Alade a na-akọ ọnụ otele?
Image copyright Tiwa Savage/Yemi Alade
Akụkọ na-efegharị na soshal midia bụ na Tiwa Savage na Yemi Alade na-ekpere onwe ha ikpe banyere onye otele ya ka ibu.
Wizkid ọ bụ iko Tiwa?
Headies 2018: Simi o ga-enwe mmeri?
Yemi Alade bulitere okwu oge o dere na Twitter ya na "Ọ bụghị ime ka otele gị dịka ka oburu na foto, Ị ma na ị dịka akara edemede 'I'. Kwụsị ịghọgbu ndị ihe gị na-amasị. Were onwe gị ka chi gị ssi kee gị."
Skip Twitter post by @yemialadee
Stop increasing your ynash in your pictures! You know you are straight like "I" embrace your real self ! Ahh ahh. Deceiving fans up and dan
— 🤜🏾 #WOMANOFSTEEL 🤛🏾 (@yemialadee) 21 Disemba 2018
End of Twitter post by @yemialadee
N'otu aka ahụ, Tiwa jikwara ikpe saa ya.
Tiwa gara n'ihu gwa ya ka ọ ghara ibido ọgụ ọ gaghị alụchali.
'Ọgụ' ahụ butere ndọrịtaụka n'etiti ndị ihe ndị otiegwu abụọ ahụ na-amasị.
Ebe ụfọdụ kwunyere Tiwa, ndị ọzọ kwụnyere Yemi.
@Terrybrainz kwuru na Yemi na-eghu Tiwa anyaọkụ kemgbe.
@Bigstan82745069 kwuru na Yemi Alade ka Tiwa Savage eewu na mba ofesi ọkachasị n'Afrịka, na otele ya kakwa nke Tiwa
Skip Twitter post by @BigStan82745069
Why would you think that tiwa is better than yemi??..ohhh!!..she's overrated here in Nigeria, but bet me👉yemi alade is well respected outside Nigeria,especially all these French countries,many Africa countries don't joke with her,the yansh she get am pass tiwa😶😥
— Big Stan (@BigStan82745069) 21 Disemba 2018
End of Twitter post by @BigStan82745069
Yemi Alade mechara rịọ mgbaghara maka ihe a odere, ma si na ọ bu ndụmọdu ka ya na-enye ndị mmadụ.
Skip Twitter post 2 by @yemialadee
End of Twitter post 2 by @yemialadee
Ọkụ gbara ụgbọala mmanụ na Legos
Ọkụ agbala mmanụ na-ebu mmanụ na nso Maryland Bridge dị na Legos.
Image copyright @TrafficChiefNG
O nweghị onye ma ihe butere ọkụ ọgbụgba ahụ mana o mere ka ahịrị ụgbọala karia n'okporoụzọ gawara Ọjọta na Ketu dị na Legọs.
Skip Twitter post by @TrafficChiefNG
[5:10PM] @Polinicky: Happening before Maryland pic.twitter.com/3RKBcc4qyr #TrafficChief
— #LagosTrafficReports (@TrafficChiefNG) 21 Disemba 2018
End of Twitter post by @TrafficChiefNG
A kpọchiri ebe e hiwere mmalite ọsọ achụmnta vootu Hope Uzodinma n'Owere
Ndị a na-eche na ha na-arụrụ gọọmenti Imo steeti ọrụ kpọchiri ama egwuregwu Dan Anyiam dị n'Owere ebe e hiwere mmalite ọsọ achụmnta vootu Hope Uzodinma.
Ọnụ na-ekwuru Gọvanọ Rochas Okorocha bụ Sam Onwuemeodo n'ekwentị, o kwuru na Uzodinma etinyeghị akwụkwọ iji nata ikike iji ama egwuregwu ahụ mee ihe n'aka Kọmịshọna ọ dị n'aka.
EFCC nwuchiri mmadụ abụọ n'Enugwu
Nkenke aha onyonyo EFCC na-alụ ọgụ megide mmerụaka na ala Naijiria
Ngalaba na-ebu agha megide nrụrụaka bụ EFCC mpaghara Enugwu anwụchiela mmadụ abụọ bu nde dọla abụọ n'ụma ụbọchị Tọsde na ọdọgbọelu Akanu Ibiam dị n'Enugwu.
Ndị uweojji Spen na ndị Katalonia kwatara
Ndị uweojii mba Spain na ndị obodo Catalonia ndị na-achọ nnwereonwe site na spain kwatara na Barcelona.
Ndị Catalonia ndị na-emem ngagharịiwe tụrụ ndị uweojji okwute,ebe ndị uweojii siri okporo saa ha.
Roy Keane katọrọ ManU maka Mourinho
Onye bụbụ onye ndụ otu bọọlụ Manchester United bụ Roy Keane akatọla agwa ndị egwuregwu otu ahu kpasara Jose Mourinho.
Keane sị na agwa ha kpara tupu a chụọ Mourniho bu ihe mechụ ihu. Ọ sị na nke a gosiri na ha abụghi ndị zuru ka eme.
Ndi omekome awakpola ime obodo na Zamfara
Nkenke aha onyonyo Ndi mere ihe ahụ gbagburu ụmụaka na ndị okorobia na-agbalị iche obodo ahụ nche
Akụkọ sị Zamfara na-akọwa na ọtụtụ mmadụ nwụrụ mgbe ndị omekome wakporo ime obodo atọ na steetị ahụ.
Mwakpo a mere na n'okpuru ọchịchị ime obodo Birnin Magaji.
Ndị bi ebe ahụ kwuru na ọtụtụ mmadụ nọ n'ugbo ha mgbe ajọọ ihe a bịakwutere ha.
N'okwu ndọrọndọrọ ọchịchị,
Onyeisi ndị Omeiwu Naịjirịa bụ Bukola Saraki akatọla bọọjetị Onyeisiala Muhammadu Buhari nyere ya na ndị otu ya ụbọchị Wenesde.
Saraki sị na ya bụ ihe Bekee kpóró Budget 2019 agaghị enyere Naịjirịa aka.
Ka nke a na-eme, onye bụbụ osote gọvanọ na Kano edurula ụfọdụ ndi na-akwado aka chịbụrụ Kano steeti bụ Rabiu Kwankwaso laghachi APC.
Hafizu Abubakar na ndị otu ya so kwankwaso gbaga PDP n'afọ a, mana ha ekwughi ma ọ ga-eso ha n'azụ na nlaghachi a.
Nkenke aha onyonyo James Mattis na Donlad Trump
Onye odeakwụkwọ Amerịka n'ihe banyere nchekwa bụ Jim Mattis etinyela akwụkwọ arụkwaghịm
Mattis sị na ya mere nke a makana echiche ya gbasara etu Amerịka na mba ofesi ga-emekọta adabaghị.
Ihe na-eme ka Trump si ndị agha Amerịka nọ agha na mba Sirịa lọta.
Nkenke aha onyonyo Naịjirịa na mba Congo, England na Czech ga-asọ mpi enyi na enyi tupu e bido asọmpị iko mbaụwa n'ezie
Super Eagles nke NaỊjirịa ka bụkwa ndị nke iri anọ na anọ n'ụwa.
Nke gosiri na ha apụghi n'ọkwa ha no n'ọnwa Ọktoba.
Eagles bụ ndị nke anọ n'Afịrịka ka Senegal ka tụrụ ugo dịka ndi nke mbu n'Afịrịka.
Gee akuko a ebe a:
Media captionỌ ga-ekwe gị mee, kwuo ihe bụ 'Flag' n'Igbo
Nchekwa ndị ụwe ojii